Hadiyadaha Tiknoolajiyadda ugu Fiican Maalinta Aabbaha | Wararka Gadget
Ma waxaad aabbo u doonaysaa hadiyad Kuwaani waa kuwa xagga farsamada ugu fiican
Villamandos | | General
Axada soo socota waa “Maalinta Aabbaha” oo inbadan oo naga mid ah wali hadiyad la’aan baynu nahay, waxaan dooneynay inaan gacan ku siino, adiga oo maqaalkan ku tusinaya hadiyadaha tikniyoolajiyadeed ee ugu fiican ee aad siin karto aabbahaa iyo kuwa aan horeyba kaaga sii digeyno inaad ku saxnaan doontid nabadgelyo buuxda.
Intaas waxaa sii dheer, iyo in laga dhigo mid aad u fudud, kuwa ugu badan ee aan tusayno waxaa laga heli karaa Amazon, marka waa inaad kaliya raacdaa xiriirka aan dhignay si aan u soo iibsanno oo aan ku helno saacado yar gudahood gurigaaga. Haddii ay tahay inaad u iibsato hadiyad aabbahaa, ha u oggolaan waqti dheeri ah inuu ku dhaafo, oo aad go'aan ka gaarto mid ka mid ah xulashooyinka aan maanta soo jeedineyno.
1 Nintendo Classic Mini (NES)
2 Rukunka Netflix
3 Mi Band S1
4 Telefoon casri ah oo dhexdhexaad ah; Moto G4 Plus
5 Telefoon casri ah oo heer sare ah; Samsung Galaxy S7 Edge
6 Rukhineynta Spotify
8 Samsung Gear S3 Frontier
9 Nintendo Switch
Nintendo Classic Mini (NES)
Waalidiin badan oo leh caruur da'dooda u dhaxeysa 30 ilaa 40s ayaa saacado badan la qaatay caruurtooda iyagoo ciyaaraya mid ka mid ah qalabka ugu horeeya ee suuqa lagu arko. Waxaan ka hadlaynaa dabcan NES, oo hadda la soo noqotay Nintendo Classic Mini oo na siiya soddon ciyaarood oo aan ugu raaxeysanno xaddid la'aan.
Helitaanka qalabkani waa dhibaato weyn, in kasta oo qiimaheeda rasmiga ahi yahay 60 euro, way adag tahay in la helo cutubyo laga heli karo qiimahaas. At Amazon waxaan ka iibsan karnaa dhib la'aan waxaanan ku heli karnaa saacado yar gudahood, laakiin qiimaheedu wuxuu gaarayaa ilaa 125 euro.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan macquul aheyn in aan la weyneyn waa a Rukunka Netflix, kaas oo waalid kasta uu ku raaxeysan karo tiro aad u tiro badan oo taxane ah, filimaan ama dokumentiyo noocyo kala duwan leh.
Qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa 9.99 euro, inaad awoodo inaad sidoo kale la wadaagto aabahaa si hadiyadadu uga soo baxdo tan ugu dhaqaalaha badan. Dabcan, taxaddar inta aad siin doontid rukunka maxaa yeelay waxaad ku dhamaan kartaa aabbahaa Netflix sannado.
Kusoo Biir Netflix Halkan.
Mi Band S1
Xirashada ugu jaban ee aan ka heli karno suuqa dhab ahaantii waa Xiaomi Mi Band S1, taas oo noo ogolaaneysa inaan qiyaasno dhammaan dhaqdhaqaaqa jirka ee maalinteenna maalin, marka lagu daro saacadaha aan seexanno.
Haddii aabbahaa jecel yahay cayaaraha ama in wax walba gacanta lagu hayo, hadiyaddan waad ku hubsan doontaa. Dabcan, warka xun ayaa ah in sida xaqiiqada ah aad waqti badan ku qaadaneyso inaad u sharaxdo aabahaa sida loola shaqeeyo tan Mi Band S1 adigoon ku waalaneyn farabadan waraaqaha Shiinaha.
Telefoon casri ah oo dhexdhexaad ah; Moto G4 Plus
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin qalab mobilo ah, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah waxa loogu yeero dhexdhexaadka suuqa sida Moto G4 Plus. Waxay leedahay shaashad 5.5-inji ah oo leh xallinta Full HD, 2GB RAM iyo 16GB oo keyd ah oo gudaha ah.
Intaas waxaa sii dheer, aabahaa wuxuu isticmaali karaa kaamirada cajiibka ah ee terminaalkan waqti kasta si uu sawiro uga qaado waqti kasta iyo goobkasta oo waligiisna ha joojin badbaadinta hal xasuus weligiis.
Telefoon casri ah oo heer sare ah; Samsung Galaxy S7 Edge
Haddii lacagtu aysan dhibaato ahayn waxaan had iyo jeer u janjeedhanaa a wac taleefanka casriga ah-dhamaadka sare. Xaaladdan oo kale ayaynu ka hadlaynaa Samsung Galaxy S7 Edge taasi waxay na siineysaa awood aad u weyn oo aabahaa uusan ka faa iideysan karin. Intaa waxaa sii dheer, kamaradeeda waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa, taas oo marka lagu daro kuu ogolaanaya inaad keydiso wax xasuus ah weligood, waxay kuu oggolaan doontaa inaad ku sameyso tayo aad u weyn.
Haddii aabbahaa uusan xiiseyneynin taxanaha ama filimaanta oo aad doorbideyso muusikada, waxaad had iyo jeer u janjeeraysaa inaad isaga siiso rukhsad Spotify ah.
Sida ku saabsan Netflix, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inaad la wadaagto isaga iyo xitaa dadka kale.
Kusoo Biir Spotify Halkan.
Xaqiiqdii way adkaan doontaa in la helo waalid jecel inuu u akhriyo buugaagta qaab dijitaal ah, laakiin waxaa jira qaar iyaga u ah eReader waa hadiyad kaamil ah. Ka mid ah xulashooyinka badan ee naloo soo bandhigo suuqa, kuwa ugu fiican ayaa ah Amazon Kindle.
Waxay kuxirantahay lacagta aan dooneyno inaan isticmaalno, iyo baahida aabaheena, Nooca Cagaarka, Voyage Kindle, Paperle Kindle ama Shidin aasaasi ah. Haddii aabbahaa ka helo buugaagta buugaagta (eBooks) oo uu maalintiisa wax ku akhriyo, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad raacdo qalabka ugu horreeya. Dhinaca kale, haddii aadan aad ugu qanacsanayn waxa aad isticmaali doontid, waxaad isku dayi kartaa aasaaska Kindle, buug elektaroonig ah oo kaamil ah si aad uga bilowdo adduunka akhriska dhijitaalka ah..
Smartwatches ayaa nolosheena u yimid si aan u sii joogno, waxaana laga yaabaa in la joogo waqtigii loo heli lahaa hadiyad mid ah aabahaa si loo casriyeeyo, tikniyoolajiyad ahaan. Hadda waxaa jira tiro badan oo qalab noocan ah oo laga heli karo suuqa, in kasta oo aan go'aansanay inaan ku dheganaano midka cusub markan. Samsung Gear S3 Frontier.
Haddii aadan rabin inaad qarashgareyso lacag intaas le'eg, waxaad dooran kartaa a Moto 360, a Huawei Watch ama xitaa qaar xitaa xulashooyin xitaa ka jaban sida Sony Smartwatch 3.
Haddii aabbahaa yahay gamer, ikhtiyaar aad u fiican oo aad ku siiso Axaddan soo socota waa cusub oo la bilaabay Nintendo Switch, in haa iyo nasiib daro waxay kugu kici doontaa sacab fiican oo yuuro ah.
Dabcan waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Amazon si aad ugu haysatid guriga berri, ciyaarta aad dooratay iyo inaad awoodo inaad ciyaarto ciyaar aad ku tijaabiso ka hor inta uusan aabbahu kaligiis haysan maalmo iyo maalmo. Waxay sidoo kale noqon kartaa hadiyada ugufiican inaad waqti fiican laqaadatid aabahaa oo ku raaxeysanaya, tusaale ahaan, Zelda ama cayaaraha kale ee loo heli karo Console Nintendo.
Miyaad haddaba u dooratay hadiyad "Maalinta Aabbaha"?. Noosheeg xulashadaada booska loogu talagalay faallooyinka qoraalkan ama mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee aan joogno. Laga yaabee fikirkaaga waxaan heli karnaa hal ikhtiyaar oo kale oo aan siino aabbaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Ma waxaad aabbo u doonaysaa hadiyad Kuwaani waa kuwa xagga farsamada ugu fiican
Google wuxuu bilaabayaa shabakad fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo loo yaqaan 'Uptime'
Gantaal League waxaa lagu cusbooneysiiyay qaab ciyaar cusub